Kenya oo Duqaysay Deegaano ku yaal Jubbaland – Radio Daljir
Kenya oo Duqaysay Deegaano ku yaal Jubbaland
Febraayo 9, 2016 2:23 b 0
Talaado, Feberaayo 09, 2016 (Daljir) —Diyaaradaha Dagaalka ee Kenya ayaa la sheegay inay dhowr jeer saqdii dhexe ee xalay duqeeyeen Deegaanka Beer-xaano oo 65 KM u jirta magaalladda Kismaayo.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in ay Diyaaradahaasi duqeeyeen dhulka Kaymaha ee Deegaanka Beer-xaano, halkaasi oo ay ku sugan yihiin Dagaalamayaasha Alshabaab.
Mid ka mid ah dadka ku nool Deegaankaasi ayaa inoo sheegay inay gelinkii dambe ee xalay maqlayey guuxa Diyaaradaha iyo Qaraxyo badan oo iftiimayey.
Waxa uu tilmaamay inay Diyaaradaha dhowr jeer duqeeyeen qeybo ka tirsan Hawdka Deegaanka Beerxaano.
Duqeyntan ayaa timid, kadib, markii ay Ciiddanka Kenya iyo kuwa Maamulka Jubbaland ay horey ugu guuldaraysteen isku-day ay ku doonayeen inay Alshabaab kala wareegaan Deegaankaasi oo ku yaalla goob Istaraatijiyad leh.
Xaalladda Deegaanka Beerxaano ayaa saakayto deggan, inkastoo ay dadka weli ka baqdin qabaan inay Diyaaradaha mar kale soo weeraraan Deegaankaasi.
Dhagayso Barnaamijka Saakay iyo Dunida Talaado 09 – Febru – 2015 Maxamed Cabdullaahi Cali (Kooshin) Daljir Studio Garowe
RW ku xigeenka Somalia oo la kulmay Taliyayaal Ciidan